चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लियो
आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३ मा प्रकाशित !
२२ फागुन, बैतडी। दार्चुलाको शिखर गाविस बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको सुरुङको सबै काम सम्पन्न भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले गत माघ २९ गते स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएको थियो । चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको कुल ४।६ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर साँघुरिएको थियो । जसमध्ये ६ सय ११ मिटर काम सम्पन्न भइसकेको थियो ।
साँघुरिएको दुई सय ३२ मिटर सुरुङ खोल्न सन २०१६ सेप्टेम्बर २८ देखि सुरु भएको र शनिबार सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । “साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ”, उनले भने, “अब रकट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ ।”
सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा परीक्षण उत्पादन गर्ने र सन २०१७ को डिसेम्बरसम्म परीक्षण गरी विद्युत सञ्चालन गरिने लक्ष्यका साथ आयोजनाको अन्य काम द्रुत गतिमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । आयोजनाको एक सय ३२ किलोभोल्टको प्रसारण लाइन दार्चुलादेखि अत्तरियासम्मको सबै बनिसकेको बताएको छ ।
साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको अब रकट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । कुल ६५ मिटर रकट्र्याकमध्ये १३ मिटर सम्पन्न भइसकेको र अब ५२ मिटर मात्रै बाँकी रहेको बताएको छ ।
चमेलियाको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने छ । सन २०१७ को डिसेम्बरमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएपछि सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने भएकाले हर्षित भएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क बस सेवा
NEXT POST Next post: भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, फाल्गुन २२, २०७३ ०५:५३